Sina Sprockets sy faritra ho an'ny mpitrandraka sy mpamokatra dozer ary crane ary mpamatsy | Jinjia
Sprockets sy faritra ho an'ny mpitrandraka sy dozer ary crane
Misafidiana karazana sprocket sy sprocket isan-karazany ho an'ny 0,2 ka hatramin'ny 120 taonina ny mpitsangatsangana mahery, milina fanesorana ary milina manokana hafa.
Ny sprocket casting, bolt ary ny fifamatorana dia mifamatotra karazana sprocket sy sprocket karazana welding azo antoka ny fivoriana tonga lafatra ary koa afaka manafoana ny mety hisian'ny bolt tsy afaka manamboatra ny lavaka na malalaka.
Ny halalin'ny famonoana olona dia manome antoka ny fahaizan'ny anti-akanjo sy ny androm-piainana lava kokoa.
Fampidirana lalina mihamafy sy mihalasa henjana tsara amin'ny mombamomba ny nify iray manontolo manome fiainana maharitra. Na avy amin'ny vy vy na avy amin'ny forging mafana, ny sprockets MZ dia manome antoka ny fanoherana sy faharetana faran'izay betsaka na dia amin'ny fampiharana mafy indrindra aza. Ny milina marina an'ny hubs sy flanges dia manome fifanakalozana lafatra.
Amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny fanoherana ny akanjo. Ny hamafin'ny haavony, ny halaliny ary ny fotony dia midika hoe ny fizarana MZ dia manome fiainana maharitra, fanoherana ny famoritana, fahatapahana ary fitazonana fitaovana farany ambony. Ny famolavolana bolt-on dia mampihena ny fihenan'ny masinanao.
1. Atsipazo vy na vy sandoka mafana ho an'ny fikorianan'ny voamadinika anatiny tsara indrindra
2. 4-8mm lalina nohamafisina tsara ho an'ny HRC45
3. Tezitra mba hanoherana ny famakiana sy ny fikapohana
4. Volavola nohavaozina mba hampihenana ireo faritra misy fifantohana
5. Ny famolavolana nify mihaza dia manitatra ny androm-piainana
6. Ny milina marina amin'ny fipetrahana dia miantoka ny fahombiazana tsara indrindra
1. Voasandoka ho an'ny fikorianam-bary anatiny indrindra
2. Amin'ny alàlan'ny henjana noho ny hamafin'ny faritra avo (HRC> 50) sy ny fotony henjana (HRC 45)
3.Ny famolavolana mialoha sy ny famolavolana marina ny fipetrahana dia miantoka ny fahombiazana tsara indrindra
Teo aloha: mpanamboatra rohy assy komatsu any China
Manaraka: Caterpillar Crawler Excavator undercarriage IDLER